The General Assembly stands with the people of Myanmar. There must now be consistent representation throughout the UN. - Special Advisory Council for Myanmar
Home Statements The General Assembly stands with the people of Myanmar. There must now be ...
The General Assembly stands with the people of Myanmar. There must now be consistent representation throughout the UN.
December 7th, 2021 • Category Statements • 395 Views
ကုလသမဂ္ဂ အထွေထွေညီလာခံသည် မြန်မာနိုင်ငံသားများနှင့် အတူ ရပ်တည်လျက်ရှိသည်။
ကုလသမဂ္ဂလုပ်ငန်းစဉ်တစ်လျှောက် ကိုယ်စားပြုမှုမှာ ယခုအချိန်တွင်တစ်သမတ်တည်း ရှိနေရမည်။
7 December 2021: Myanmar must be consistently represented by appointees of the National Unity Government (NUG) throughout the United Nations (UN) system in keeping with the decision made by the UN General Assembly, says the Special Advisory Council for Myanmar (SAC-M).
The UN General Assembly decided yesterday,6December 2021, that His Excellency Ambassador Kyaw Moe Tun, the appointee of the NUG, continues to represent Myanmar in the UN. Although the illegal military junta in Myanmar sought to represent Myanmar in the General Assembly, it was denied by the 193 Member States of the UN.
“The United Nation’s decision confirms unequivocally that the junta does not represent the government of Myanmar in the eyes of the General Assembly,” said Marzuki Darusman of SAC-M. “The principled decision is of great importance for the people of Myanmar and for the credibility of the United Nations itself.”
Ambassador Kyaw Moe Tun has continued to represent Myanmar on behalf of the sole legitimate government since the military’s attempted coup in February. However, Myanmar has gone unrepresented in several UN forums in recent months, with bodies deferring to the General Assembly for guidance.
“The General Assembly is the UN’s primary representative political organ,” said Chris Sidoti of SAC-M. “Now that it has confirmed Kyaw Moe Tun will participate in the General Assembly on behalf of Myanmar for another year, there must be consistent representation across the UN system. That means appointees of the NUG – no empty seats and no members of the junta.”
The military junta has tried to imposeamilitary dictatorship on Myanmar through terror and violence for eleven months. Junta forces are engaging in terrorist acts, such as public executions and hostage-taking, and have launched large-scale military offensives in rural and ethnic areas that involve the shelling and torching of homes and denial of access to food and medical supplies for entire communities. Evidence of the junta’s violence showsawidespread and systematic attack onacivilian population amounting to crimes against humanity.
“Kyaw Moe Tun and other appointees of Myanmar’s democratically-elected representatives are the only ones who can speak for the people of Myanmar in the United Nations,” said Yanghee Lee of SAC-M. “The international community must listen very carefully and act accordingly to what the people of Myanmar are asking us to do. We cannot continue to fail the peoples of Myanmar as they struggle to free their country from the Tatmadaw’s violence, oppression and exploitation.”
Download the statement in English: SAC-M PR Credentials Decision ENGLISH
ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေညီလာခံ၏ ဆုံးဖြတ်ချက်အရ မြန်မာနိုင်ငံအနေဖြင့် ကုလသမဂ္ဂ၏ လုပ်ငန်းစဉ်များတွင် အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ (NUG) မှ ခန့်အပ်ထားသော ကိုယ်စားလှယ်များမှ တစ်သမတ်တည်း ကိုယ်စားပြုရမည်ဟု မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ အထူးအကြံပေးကောင်စီမှ ပြောကြားသည်။
ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေညီလာခံမှ ယမန်နေ့ ၂၀၂၁ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ ၆ ရက်နေ့တွင် အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရမှ ခန့်အပ်ထားသည့် သံအမတ်ကြီး ဦးကျော်မိုးထွန်းအား ကုလသမဂ္ဂတွင် မြန်မာနိုင်ငံအတွက် ဆက်လက်ကိုယ်စားပြုစေရန် ဆုံးဖြတ်ချက်ချခဲ့သည်။ တရားမဝင် စစ်အစိုးရမှ ကုလသမဂ္ဂတွင် မြန်မာနိုင်ငံအား ကိုယ်စားပြုရန် ကြိုးပမ်းခဲ့သော်လည်း ကုလသမဂ္ဂ၏ အဖွဲ့ဝင် ၁၉၃ နိုင်ငံမှ ငြင်းပယ်ခဲ့သည်။
“အထွေထွေညီလာခံရဲ့ အမြင်မှာ စစ်ကောင်စီကို မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ အစိုးရအနေနဲ့ အသိအမှတ်ပြုခြင်း မရှိဘူးလို့ ကုလသမဂ္ဂက ပြတ်ပြတ်သားသား ဆုံးဖြတ်ချက် ချလိုက်တယ်။ ဒီလို တရားနည်းလမ်း တကျ ချမှတ်ထားတဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်ဟာ မြန်မာနိုင်ငံသားတွေအတွက် အင်မတန် အရေးကြီးပြီး ကုလသမဂ္ဂအပေါ် အများယုံကြည် လက်ခံနိုင်မှုအတွက်လည်း အရမ်းကို အရေးကြီးတယ်။” ဟု မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ အထူးအကြံပေးကောင်စီ မှ Marzuki Darusman က ပြောကြားခဲ့သည်။
စစ်တပ်မှ အာဏာသိမ်းရန် ကြိုးပမ်းခဲ့သည့် ဖေဖော်ဝါရီလမှစ၍ သံအမတ်ကြီး ဦးကျော်မိုးထွန်း အနေဖြင့် တစ်ဦးတည်းသော တရားဝင်အစိုးရ ကိုယ်စားပြုအနေဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံအတွက် ဆက်လက် ကိုယ်စားပြုခဲ့သည်။ သို့သော် အထွေထွေညီလာခံ၏လမ်းညွှန်ချက်ခံယူရန် စောင့်ဆိုင်းခဲ့ ရသည့်အတွက် လွန်ခဲ့သည့်လများတွင် ပြုလုပ်ခဲ့သော ကုလသမဂ္ဂအစည်းအဝေးများ၌ မြန်မာနိုင်ငံ အနေဖြင့် ကိုယ်စားပြု တက်ရောက်နိုင်ခြင်း မရှိခဲ့ပေ။
“အထွေထွေညီလာခံဆိုတာ ကုလသမဂ္ဂရဲ့ အဓိကကိုယ်စားပြု နိုင်ငံရေးအင်္ဂါရပ်တစ်ခုဖြစ်တယ်။ အခု ဦးကျော်မိုးထွန်းက အထွေထွေညီလာခံမှာ မြန်မာနိုင်ငံကိုယ်စား နောက်ထပ်တစ်နှစ် ပါဝင်တက်ရောက်မယ် ဆိုတာကို အတည်ပြုလိုက်ပြီး ကုလသမဂ္ဂရဲ့ လုပ်ငန်းစဉ် တလျှောက်လုံးမှာ ကိုယ်စားပြုမှုက တစ်သမတ်တည်းရှိရမှာဖြစ်တယ်။ ဆိုလိုတာကတော့ အမျိုးသား ညီညွတ်ရေးအစိုးရက ခန့်အပ်ထားတဲ့သူ ဖြစ်ပြီး နောက်ထပ် နေရာလွတ် မရှိတော့ပဲ စစ်ကောင်စီရဲ့ အဖွဲ့ဝင်လည်း မပါတော့ဘူး။” ဟု မြန်မာနိုင်ငံ အထူးအကြံပေးကောင်စီမှ Chris Sidoti က ပြောကြားခဲ့သည်။
စစ်ကောင်စီသည် ဆယ့်တစ်လတိုင်တိုင် ကြောက်မက်ဖွယ်ရာ အကြမ်းဖက်မှုများကို အသုံးပြု၍ မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း စစ်အာဏာရှင်စနစ်ကို ကျင့်သုံးရန်ကြိုးပမ်းလျက်ရှိသည်။ စစ်ကောင်စီ၏ တပ်ဖွဲ့များသည် အကြမ်းဖက်မှု လုပ်ရပ်များဖြစ်သည့် လူထုရှေ့သတ်ဖြတ်ခြင်း၊ ဓားစာခံများ ဖမ်းဆီးခြင်း အပြင် ကျေးလက်ဒေသနှင့် တိုင်းရင်းသားနယ်မြေများတွင်လည်း လက်နက်ကြီး ပစ်ခတ်ခြင်း၊ လူနေအိမ်များအား မီးရှို့ဖျက်စီးခြင်း၊ စားနပ်ရိက္ခာနှင့် ဆေးဝါးများ ရရှိမှုကို ပိတ်ပင်ခြင်းစသည့် ဒေသတစ်ခုလုံးအပေါ် ထိုးစစ်ဆင်မှုများကို ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် လုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။ စစ်ကောင်၏ အကြမ်းဖက်မှုဆိုင်ရာ သက်သေများအရ လူသားမျိုးနွယ်အပေါ် ကျူးလွန်သည့် ရာဇဝတ်မှုအဖြစ် သတ်မှတ်နိုင်သော တိုက်ခိုက်မှုများအား အရပ်သားများအပေါ် ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်နှင့် စနစ်တကျ ကျူးလွန်လျက် ရှိကြောင်းကို ဖော်ပြနေသည်။
“ဦးကျော်မိုးထွန်းနဲ့ တခြား မြန်မာနိုင်ငံက ဒီမိုကရေစီနည်းလမ်းတစ်ကျ ခန့်အပ်ထားတဲ့ ကိုယ်စားလှယ်တွေ ကသာ ကုလသမဂ္ဂမှာ မြန်မာနိုင်ငံက ပြည်သူတွေအတွက် ကိုယ်စားပြု ပြောဆိုနိုင်တဲ့သူတွေဖြစ်တယ်။ နိုင်ငံတကာ အသိုင်းအဝိုင်းအနေနဲ့ မြန်မာနိုင်ငံက ပြည်သူတွေရဲ့ တောင်းဆိုသံကို ဂရုတစိုက် နားထောင်ပြီး လိုက်ပါဆောင်ရွက်သင့်တယ်။ မြန်မာနိုင်ငံက ပြည်သူတွေက သူတို့နိုင်ငံကို တပ်မတော်ရဲ့ အကြမ်းဖက်မှု၊ ဖိနှိပ်မှုနဲ့ ခေါင်းပုံဖြတ် အမြတ်ထုတ်မှုတွေကနေ လွှတ်မြောက်အောင် ကြိုးပမ်းနေတဲ့အချိန်မှာ ကျွန်မတို့တွေအနေနဲ့ သူတို့ကို လျစ်လျူရှုထားဖို့ မဖြစ်နိုင်ဘူး။” ဟု မြန်မာနိုင်ငံ အထူးအကြံပေးကောင်စီမှ Yanghee Lee က ပြောကြားခဲ့သည်။
Download the statement in Burmese: SAC-M PR Credentials Decision BURMESE